Belt Conveyor na Indonesia - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>Nri na egwu ihuenyo>> Belt Conveyor na Indonesia
Belt Conveyor na Indonesia
edemede si: Nri na egwu ihuenyo | oge: April 5, 2013 | Tag:Nri na egwu ihuenyo	|
Belt Conveyor na Indonesia, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ nchịkọta anụ ọkụkụ, Belt Conveyor na Indonesia, ngwá ọrụ ndị bara uru, ndị na-emepụta ihe igwe na-ebu ígwè. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Nkwupụta ụda Belt:
Na nnukwu mineral, ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ na Indonesia amalite ngwa ngwa, ọ na-ekerekwa òkè dị mkpa na mmepe mmekọrịta ọha na eze. Belt conveyor ke Indonesia na-ekere òkè dị mkpa na ụlọ ọrụ ngwuputa. Ndị na-ebufe na-enwe akụkụ dị iche iche, nke dị elu ma dị mfe na mgbidi, dị mfe ịnọgide na-enwe. Egwusi egwu anyị na-eme mgbanwe maka osisi ndị na-akụgharị na nke na-agagharị agagharị. A na-ejikarị ha eme ihe n 'ụlọ ọrụ ngwuputa, ihe dị iche iche na ikpo ọkụ iji nyefee ihe mkpofu ma ọ bụ ihe ngwugwu. Dịka ngwá ọrụ dị iche iche na-ebufe, usoro mbufe nwere ike ịbụ otu na-enweghị onwe ma ọ bụ multi-conveyors ma ọ bụ jikọtara ya na ngwá ọrụ ndị ọzọ.
The belt conveyors rụrụ site nwere ike ejikwara na ọnọdụ okpomọkụ ọnọdụ sitere na -20 ℃ ka + 40 ℃. Okpomọkụ nke ihe a na - ebugharị site na onye na - eburu belt a kwesịrị ịdị ala karịa 50 ℃ .A ụdị belt nke SJLC na - emepụta bụ:
Ụzọ Ịkwọ ụgbọala kewara:
Ugbochi STD-Mechanical: Ọ na-eji ígwè eletrik na-eji ígwè eletrik (nke nwere ụgbọala na-apụ apụ) na ígwè ịgba ígwè;
STDJ Ⅱ Mechanical Drive Series. Ọ na-ewepụta usoro ime ihe na ikuku belt;
STD-Electric Rotor Drive Series Ọ na-asọpụrụ site na rotor eletriki.
Ụzọ Mgbakwunye kewara:
Dezie usoro: Ọ na-arụnyere ozugbo na ntọala;
Usoro SDY-Portable: Ọ nwere ike ịdị mfe ma bụrụ nke a na-akpalighị akpali na ikike nwere ike gbanwee.
Ihe ndi ozo kewara:
Ihe ejiji belt nke SJLC mepụtara nwere akụkụ dị iche iche dị iche iche.
E nwere ụdị ihe abụọ dị iche iche, nke a kwadebere maka ịrụzi mgbatị mgbe onye ọzọ na-enweghị. Mgbe ị na-edezi igwe, ndị ahịa kwesịrị inye anyị ntụziaka doro anya.
Nka na ụzụ nke Belt Conveyor:
Belt Width (mm) Agba Ogologo (m) / Ike (Kw) Belt Speed ​​(m / S) Ikike (t / h)
Belt Conveyor Manufacturer na Indonesia:
Ụlọ ahịa Shanghai bụ onye na-emepụta belt ọkachamara gburugburu ụwa. A na-enye ndị ahịa zuru ụwa ọnụ ngwá ọrụ dị elu karịsịa ndị na-ebu belt na Indonesia na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro nchịkọta. E wezụga nke ahụ, a na-enye ndị ahịa niile ọrụ nlebara anya. na-eburu gị ụzọ ma na-eme gị n'ihu.
← Ntọala Ala Na-adịghị Mkpa
Ntughari Ntughari →